Miala amin'ny mpiavonavona dia miditra amin'ny mpiavonavona | Hery - Tsiky dia ampy |
Miala amin'ny mpiavonavona dia miditra amin'ny mpiavonavona
2009-11-10 @ 08:05 in Politika
Anisan'ny tsy (n)itiavan'ny olona an-dRavalomanana mihitsy ilay fizahozahoany etsy sy eroa. Ny teny an'avona fanaony. Marina fa nahavita zavatra maro izy ary tena nampandroso tokoa ny firenena fa ilay mizahozaho dia mahabe fahavalo. Misy ny miteny hoe tsy mba manaja olona izy, ilay fomba fiteniny mihitsy no tonga dia mahadikidiky.
Fa rehefa dinihina ity dia toa izany koa no ataon'i Rajoelina. Zara raha vao tonga teo amin'ny toeran'ny filohan'ny tetezamita izy dia efa niala any ny hoe "Vous pouvez m'appeler président"... ohatra ny hoe izany no tena manan-danja. Noezahina mafy mihitsy ny nitazona io hoe "Président" io hatramin'ny nipetrahany teo. Ary izao izy niverina avy any Addis-Abeba izao indray moa dia ny nahafaly sy nampirehareha azy voalohany dia ilay hoe nandresy hono izy fa "Mbola izy ihany no prezidà"... Toa mampite hiteny hoe "Raha izay no nilainy, omeo azy any fa andao isika hanatsara ny firenena". Izay mihitsy aza angamba no tao antsain'ireo nivory tany hoe aleo izy hilingilingy eo amin'ny "Prezidà" eo fa izay hanarenana ny firenena jerena.
Ny mampanahy ahy dia ny momba ny fifidianana ho avy. Raha olona te ho Prezidà mafy toa izany ve dia tsy hilatsaka hofidiana? Ary raha milatsaka ka resy ve dia hahatanty resy? Tsy hisy fanonganam-panjakana vaovao indray raha sendra resy eo?... Ho hita eo ihany